Abaaro Lixaad leh oo Kadhacay Soomaaliya
Abdikarin Ali Haji oo ah 28-jir Soomaaliyeed oo laga tarxiili lahaa dalka NewZealand ayaa dib loo dhigay tarxiilkiisii kadib markii sidaas ay maxkamadi xakuntay, waxaa loo tarxiili lahaa Soomaaliya. Waxaa wararku intaas ku dareen in Soomaali ku mudahaaradi lahayd garoonka Auckland oo laga dhoofin lahaa ninkaas Soomaaliyeed in ay mudaharaadkii joojiyeen kaddib markii ay maqleen in tarxiilkii Abdikarin dib loo dhigay. Tarxiilkaani haddii uu hirgeli lahaa wuxuu noqon lahaa qofkii ugu horeeyey ee Soomaaliyeed oo laga tarxiilo NewZealand.
Somali man's deportation halted by interim court order
... this is the first Somali who faced removal from New Zealand.". America, Britain and
Australia all had a policy that it was not safe to remove anyone to Somalia ...
Somali stays after court order - Nzoom.com
Waxaa kadhacay Abaar Xaalufisay Gobolada Sool, Sanaag, Mudug iyo Bari, Taasoo keentay in Xoolihii noolaa Gabaabsi nodaan, kaddib markii Daaqii ka dhamaaday dhulka.
Waxaa kaloo dhacday Biyo la’aan daran oo kajirta deegaamadaas iyadoo loogu dhaamiyo Gawaari Booyado xambaarsan, Dadka intooda badani magadan karaan biyahaas waayo Dhaqaalihii ayaa kuyaraaday Gacantooda maadaama isha keliya ee wax soo saarkoodu kuxiran yahay uu ahaa Xoolaha Nool.
Waxaa yar meel haatan ay Xoola dhaqatadu hamiga kuhayaan inay u naqraacaan iyadoo lasheegayo meelo kamida Xeebaha Bada India inay waxka cusbaadeen.
Waxaan waraystay qaar kamida ganacsatada Xoolaha Dhoofiya , waxay ii sheegeen in Xoolaha maanta lakeenayo Boosaaso ay aad u liitaan, waxa kaloo laga dareemay Magaalada Boosaaso Xoolihii Hilibka ahaa oo kuyaraaday iyadoo lagu jiro Bishii Ramadaan.
Waxaa kajira Gobolada Puntland Olole Macaawino ee ladoonayo in Gurmad loo sameeyo Reer guuraaga Jiilaalku soo foodsaaray, sida muuqata looma kala harin inta waxgaradka sidii loogu hawl geli lahaa iyo Qaabkii laysaga kaashan lahaa in Samafal loofidiyo Ummada Tabaalaysan,
Xaga Macayshadda Magaalada Boosaaso wax isbedelay majiraan markaan kahadlo sicirka Raashinka—
Sokorta Loorkii.. $15.
Baasto Hal karton waa 10 Kg $12.5,
Saliid Halkarton 6x3 Kg=18 Kg $13.
Laakiin waxaa kajira in Dhaqaalihii hoos u dhacay Maadaama dhoofintii Xoolaha yaraadeen taasna waxaa sababay Abaarta kajirta Meelihii lagasoo qaadijiray Xoolaha.
Sidaan wada ognahay Soomaaliya waxay soo martay Marxalad Adag iyo Colaad foolxun, iyadoo aaney jirin waxsoosaar iyo Cid wax uqabatay, hase yeeshee waxaa Alle kubadbaashey waxa kasoo gala Xoolaha Nool, ayagiina maanta waxay qarka u saaran yihiin inay faraha kabaxaan, haddaan Allah badbaadin.
Allah waxaan kabaryeynaa inuu Colaada iyo Abaarta nagasaaro.
Maxud Maxed Ciise,
Qoraaga Zakada Maalka.... Guji
Booyadii Biyo ah Waxay Gaartey $45-60
[Gargaar Degdeg ah Abaarta Kuhabsatey Soomaaliya]
Hay'adda Almanhal waxay dhammaan umada Soomaaliyeed ugu baaqeysaa in gargaar degdeg ah loo fidiyo shacabka Soomaaliyeed ee abaartu saamaysay ee kaqaxaya miyiga oo.... Guji Nov 11